Nhau - Magetsi Kubuda Machining
Edm inonyanya kushandiswa kugadzira machina uye zvikamu zvine maitiro akaomarara emakomba nemakomba. Kugadzira zvinhu zvakasiyana-siyana zvinofambisa, senge yakaoma alloy uye yakaoma simbi; Kugadzira makomba akadzika uye akanaka, maburi akasarudzika, maburi akadzika, mapfundo akatetepa uye kucheka matetetete, nezvimwe; Kugadzira akasiyana ekugadzira maturusi, matemplate uye tambo mhete gaji, nezvimwe.
Iyo yekugadzirisa musimboti
Munguva yeEDM, chishandiso chemagetsi pamwe nebasa rekushandira zvakabatana zvakanangana nematanda maviri emagetsi ekupomba uye akanyudzwa mune irikushanda mvura, kana iyo mvura inoshanda iri kubhadhariswa mukati mekuyerera gap. Chishandiso chemagetsi chinodzorwa kupa chikafu chebasa kuburikidza gap otomatiki kudzora system. Kana mukaha uripakati pema electrode maviri wasvika pane imwe nhambwe, mweya wekusunda unoshandiswa pane iwo ma electrode maviri uchaputsa mvura inoshanda uye inogadzira kubuda kwemoto.
Mune iyo micro chiteshi yekudonhedza, huwandu hwakawanda hwesimba rekupisa hwakaiswa ipapo, tembiricha inogona kuve yakakwira se10000 the uye kumanikidza kune zvakare nekuchinja kwakapinza, kuitira kuti yemuno iratidze simbi zvinhu panzvimbo yekushanda kwenzvimbo ino pakarepo nyungudika uye uve nemhepo, woputika wopinda mune irikushanda mvura, nekukasira kukombama, kuumba solid simbi inodzika, uye yozotorwa neinoshanda mvura.Panguva ino pamusoro peiyo workpiece inosiya diki gomba mamaki, kubuda kwakamira zvishoma, iyo kushanda fluid pakati pemaviri ma electrode kudzoreredza iyo insulation mamiriro.
Inotevera kurova kwemhepo kunobva kwaputsika kune imwe nzvimbo uko maelektrode ari padhuze nepadhuze, achiburitsa tsvina uye achidzokorora maitiro.Saka, kunyangwe hazvo huwandu hwesimbi hwakakanganiswa pamhepo yekubuda iri diki kwazvo, simbi yakawanda inogona kukanganiswa nekuda kuzviuru zvekupomba zvinobuda pasekondi, iine kumwe kugadzirwa.
Pasi pemamiriro ekuchengeta iyo yekubuda zvinoyerera pakati pechishandiso electrode uye iyo yekushandira, iyo simbi yeiyo workpiece yakaora apo chishandiso chemagetsi chinoramba chichiiswa mukati meiyo workpiece, uye pakupedzisira chimiro chinoenderana nechimiro chechishandiso chemagetsi chakashongedzwa. Naizvozvo, sekureba sekuumbwa kwechimbo chemagetsi uye iyo inofamba mafambiro pakati peye chishandiso electrode uye workpiece, akasiyana maprofiles akaomeswa anogona kugadzirwa.Tool maelekitirodhi anowanzo gadzirwa nehurira-husina zvinhu zvine yakanaka conductivity, yakakwira kusungunuka poindi uye nyore kugadzirisa, senge mhangura, graphite, mhangura-tungsten alloy uye molybdenum.Paunenge uchigadzira machining, chishandiso chemagetsi chinewo kurasikirwa, asi zvishoma pane huwandu hwengura yeiyo workpiece simbi, kana kunyange padyo pasina kurasikirwa.
Senzvimbo yekubuditsa, iyo inoshanda mvura inoitawo basa mukutonhora uye chip kubviswa panguva yekugadzirisa.Common inoshanda mvura mvura iri pakati nepasi viscosity, yakakwira flash point uye yakagadzikana kuita, senge parafini, deionized mvura uye emulsion. rudzi rwekuzvifadza-kuburitsa, hunhu hwayo ndeinotevera: iwo maelekodhi maviri emoto anobuda ane yakakwira voltage isati yabuda, kana iwo maelektrode maviri achisvika, iyo yepakati yaputswa pasi, kozobuda spark kubuda. Pamwe pamwe nekuparara kwacho, kuramba pakati pemagetsi maviri kunodzikira zvakanyanya, uye iwo magetsi ari pakati pemagetsi anodzikira zvakanyanya. Inopisa gwara rinofanira kudzimwa munguva mushure mekuchengetwa kwenguva pfupi (kazhinji 10-7-10-3s) kuchengetedza " chando pole ”hunhu hwekubuda kwesaraki (kureva., simba rekupisa renji simba kushandurwa harisvike pakadzika kweiyo electrode munguva), kuitira kuti simba rechiteshi rishandiswe Simba remagetsi rinogona kukonzera kuti magetsi ashatiswe munharaunda imomo.Iyo nzira iyo iyo corrosion phenomenon inoburitsa kana uchishandisa tsvina kubuda inoita mativi machining kune icho chinhu inonzi magetsi spark machining. Edm inokonzeresa kubuda kwemvura. svikiro mukati meiyo yepasi voltage renji. Zvinoenderana nechimiro chishandiso chemagetsi uye hunhu hwehukama hwekufamba pakati pechishandiso electrode uye workpiece, edM inogona kukamurwa kuita mashanu marudzi.Wire-cheka edM kucheka kwezvinhu zvinogadzirisa uchishandisa axially inofamba waya senge chishandiso electrode uye workpiece inofamba ichitevedza chimiro chaidiwa uye saizi; Edm ichikuya uchishandisa waya kana kugadzira conductive yekugaya vhiri seyekushandisa electrode ye keyhole kana kuumba kukuya; Inoshandiswa kumachina tambo mhete gage, tambo plug gage , giya nezvimwe. Diki gomba kugadzira, pamusoro alloying , Kumusoro kusimbisa uye mamwe marudzi ekugadzirisa.Edm inogona kugadzirisa zvinhu uye zvimiro zvakaoma izvo zvakaoma kutemwa neyakajairwa machining nzira.Hapana kutema simba panguva yekugadzira; Haigadziri burr uye yekucheka groove uye zvimwe zvinokanganisa; Iyo chishandiso chemagetsi zvinhu hazvidi kuti zvive zvakaoma kupfuura iyo yekushandira yekushandisa; Kushandisa kwakananga kwesimba remagetsi kugadzirisa, zviri nyore kuita otomatiki; Mushure mekugadzirisa, iyo yepamusoro inogadzira metamorphosis layer, iyo mune kumwe kunyorera inofanirwa kubviswazve; Izvo zvinonetsa kubata nekusvibisa kweutsi kunokonzerwa nekuchenesa nekugadziriswa kwemvura inoshanda.
Gantry Imwe Musoro Wepamusoro Pamusoro Kugaya Muchina, Gantry Double-End Surface Grinding Machine, Gantry Surface Kukuya Machine, Gantry Imwe-Yekupedzisira Surface Kukuya Machine, Gantry Yakapetwa Musoro Wepamusoro Kugaya Machine, Gantry Rudzi rwepamusoro Kugaya Machine,